နည်းပညာ မှတ်တမ်း: August 2015
An operating system is the most important software that runs onacomputer. You might be thinking, “OK, but what is software?” Software is any set of instructions that performs some task onacomputer. The operating system performs many essential tasks for your computer.
It controls the memory needed for computer processes, manages disk space, controls peripheral devices, and allows you to communicate with the computer without knowing exactly howacomputer works. Without an operating system,acomputer is useless.
ကွန်ပျူတာစနစ်ကို လည်ပတ်ဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်အရေးကြီးတဲ့စနစ်ဟာဆိုရင် operating system လို့ဆိုတဲ့ Window ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပြီ ဒါဆိုရင် Software ဆိုတာဘာလဲ ? Software ဆိုတာက တဆင့်ပြီးတဆင့် လုပ်ဆောင်ဖို့ ညွှန်ကြားထားတဲ့ ကွန်ပျူတာ၏ လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ်တစ်ရပ်ပါဘဲ။ Operating System ကလည်းဘဲ များစွာသော ကွန်ပျူတာ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်၊
၄င်းစံနစ်ကသည်ပင် ကွန်ပျူတာစံနစ်များလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သော မှတ်ညဏ်လိုအပ်ချက်များ၊ ဖိုင်နေရာချထားရေး၊ ကွန်ပျူတာ ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းများ၊ ကွန်ပျူတာအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ပြီး အလုပ်များလုပ်ဆောင်ရန် စသည်များကို စံမံလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်၊ Window လိုဆိုတဲ့ Operating System ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကို မသိဘဲ တိကျသော လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ၄င်းစံနစ်များ မရှိဘဲ လုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာ၊ Window လိုခေါ် Operating System မရှိဘူးဆိုရင် ကွန်ပျူတာဟာ အသုံးမတဲ့အရာ ကြီး ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်....။
Posted by kyaw min thein at 10:13 PM No comments:
Posted by kyaw min thein at 10:10 PM No comments:
A computer is an electronic device that manipulates information or "data." It has the ability to store, retrieve, and process data. You can useacomputer to type documents, send email, and surf the Internet. You can also use it to handle spreadsheets, accounting, database management, presentations, games, and more.
Whether you realize it or not, computers play an important role in our lives. When you withdraw cash from an ATM, scan groceries at the store, or useacalculator, you're usingatype of computer.
ကွန်ပျူတာဆိုတာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတစ်ခုပါဘဲ သူကတော့ သတင်းအချက်လက်များ (သို့) ကွန်ပျူတာအချက်အလက်များကို လက်ဖြင့်ကိုင်တွယ်အသုံးချနိုင်ပါတယ်။ ၄င်းမှာ အချက်လက်များကို သိမ်းဆည်းနိုင်ခြင်း၊ ပြန်လည်ရယူအသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ မိမိအသုံးပြုလိုသော စနစ်ကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်၊ ကွန်ပျူတာစံနစ်ကိုသုံးပြီးမှ ကျောင်းသုံး၊ ရုံးသုံးအနေဖြင့် စာစီစာရိုက်လုပ်မလား၊ ကျောင်းသုံးအထောက်အကူပြုလုပ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းအနေဖြင့်၊ အီးမေးလ် ပို့ခြင်း၊ အင်တာနက် ၀င်ရောက်အသုံးပြုခြင်းများကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်၊ ကွန်ပျူတာရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဟာ အင်မတန်မှ ကျယ်ပြန့်ပါတယ်၊ စာရင်းကိုင်နယ်ပယ်မှာဆိုရင် စာရင်းအင်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီးလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်၊ စာရင်းကိုင်ပညာ၊ အချက်အလက်များကို စံမံခန့်ခွဲခြင်း၊ အချက်အလက်များနှင့် သရုပ်ပြခြင်း၊ ဂိမ်းကစားနည်းများ၊ အခြားသော အကြောင်းအရာများကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။
အခြေအနေဟာဆိုရင် လူသားများရဲ့နေ့စဉ်ဘ၀နှင့် မိတ်ဆွေသဖွယ် တူယှဉ်တွဲလျက်အရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍမှာ ရှိနေခဲ့ပါတယ်၊ ဘဏ်ကို ATM ကဒ်မှ ငွေသွားထုတ်မလား? ကုန်တိုက်တွေမှာသွားပြီး ဈေးသွားဝယ်မလား? ဈေးသုံးစရင်းတွေကို တွက်ချက်မလား? ဒါဟာ ကွန်ပျူတာရဲ့ အသုံးဝင်မှုတွေပဲမဟုတ်ပါလား၊
Posted by kyaw min thein at 10:06 PM No comments:
globalcomputercenter မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
Posted by kyaw min thein at 10:04 PM No comments:
လူတိုင်းရဲ့လက်ထဲမှာ ရေပန်းစားတာက Mobile phone ပါ။ ဟုတ်ပါပြီ ဒီ လူတိုင်းလက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ဖုန်းကို ဘာတွေ အသုံးတည့်နေသလဲ မေးစရာမေးခွန်းရှိပါတယ်။ Phone setting ထဲမှာ မူလပါရှိတဲ့ အကြောင်းအရာအတိုင်း ပြောပြရမယ်ဆိုရင် Phone Call Message(Message)မှာတွင် နှစ်မျိုးကွဲနေပါပြီ။
SMS ၊ MMS ၊ SMS (Simple Text message ) ရိုးရိုးကန့်သတ်စာလုံးများဖြင့် ပို့ခြင်း၊ MMS (Multimedia Message) အဲဒါက Video ၊ Voice ၊ Photo (ရုပ်သံဖိုင်၊ အသံဖိုင်၊ ဓါတ်ပုံဖိုင်) စသည်များကို ပေးပို့သော စနစ်ဖြစ်သည်။ Phone ခေါ်ခြင်းနှင့် ပက်သတ်ပြီးတော့ ပြောရမယ်ဆိုရင် Local (ပြည်တွင်း)၊ Oversea (ပြည်ပ) ၊ နောက်တစ်ခုက Local Sim ကိုRomainဖွင့်ပြီးကိုရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံမှPhoneCenter
Network စံနစ်ကို သုံးပြီး Oversea စံနစ်ဖြင့် ပြည်တွင်း ၊ ပြည်ပ လက်ခံ ဖုန်းခေါ်ခြင်းကို(Romain)
လို့ခေါ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဖုန်းခေါ်စဉ် Line လွဲခြင်း အဲဒါ Line Divert လုပ်ခြင်းပါ။ ဒါက ဒီဖုန်းကို ၀င်လာတဲ့ဖုန်း Call တွေကို နောက်တစ်လုံးကို လွဲထားခြင်းပါ။ ၄င်းဖုန်းမှ လက်ခံပြောဆိုခြင်းပါ။
နောက်တစ်မျိုး Phone Center မှ Auto ပြုလုပ်ပေး ထားခြင်း Left Voice Message ပါ။ဖုန်းခေါ်တဲ့အချိန် out of Network area (ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြင်ပဧရိယာ) ရောက်နေခဲ့ရင် (ဖုန်းခေါ်ဆိုသူမှ ကိုယ်ပြောလိုသော စကားများကို မှာထားပြီး အသံချန်ထားသောစနစ်ဖြစ်ပါတယ်)။
Phone Book ဖုန်းနံပါတ်စာအုပ် ဒါက အသိမိတ်ဆွေတွေရဲ့ နံပါတ်များကို သိမ်းပြီးမှတ်သားထားပါ။ဒါမှတ်
တဲ့နေရာမှာ နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။နံပါတ်သိမ်းထားခြင်းကို Sim card တွင်သိမ်းထားခြင်း၊ Phone Memory တွင်သိမ်းထားပါ။မိမိနှစ်သက်ရာ သိမ်းပါ။နံပါတ်ပြန်ရှာခြင်း။အစပြုစကားလုံး များဖြင့် အလွယ်တကူ call
နှိပ်ပြီးခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်သိမ်းတဲ့အခါ ကြိုးဖုန်း၊ ကြိုက်တဲ့ဖုန်းဆိုပြီး နှစ်မျိုးခွဲပြီးသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်၊ အိမ်၊ရုံး ဆိုပြီးခွဲပြီးသိမ်းနိုင်တယ်။
Phone call ခေါ်တာနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ပြောချင်ပါတယ် တစ်ချို့ဖုန်းတွင် simple call (ရိုးရိုးခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်) video calling ရုပ်မြင်ပြီးခေါ်ဆိုခြင်းဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။၄င်းစနစ်ဟာ Phone center မှာပေးသော service နှင့် မိမိဖုန်းအမျိုးအစား နှင့်လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ်။Internet (Browser) ဖုန်းတော်တော် များများမှာ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ် (Browser)ကိုဖွင့်ပြီးGoogleမှမိမိသိလိုသောအကြောင်းအရာများကို
ရိုက်ပြီး search လုပ်ပါ။ ကန်သတ်ချက်မရှိ လိုအပ်သောအချက်အလက် များကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Phone Internet နှင့် ပတ်သတ်ပြီး ပြောရမယ် ဆိုရင် မိမိဖုန်းရဲ့ Network စနစ် နှင့် Phone Center မှပေးသော Network quality ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး မြန်ခြင်း နှေးခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Network စနစ်များမှာ
2G (second Generation) စနစ်သည် (E)သာပေါ်ပြီး နှေးကွေးပါတယ် ။3G (Third Generation) သည်
H+ (or) HSDPA အဆင့်သွားသည် အခြေခံ မြန်နှုန်း 200 KBPS မှ 300KBPS အထိရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းစနစ်နှင့် (Phone နှင့် ဆိုင်ပါတယ်) မိမိယူထားသော Data Plan ပေါ်တွင်လည်း မူတည်ပါတယ်။
ပမာဏ ယူထားလည်းမြန်အားပိုကောင်း။Time Baseအချိန်ဖြင့်ယူလျှင်သတ်မှတ်ချက်အတွင်းသာ360KBPS
အတွင်းသာရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အင်တာနက် ပိုင်းက များစွာကျယ်ပြန့်ပါတယ်။
Phone ကိုမိမိစိတ်ကြိုက် Personalize Profile သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။Profile မှာ General ပုံမှန်သတ်မှတ် ချက်ပါ။Silence အစည်းအဝေး ရှိနေစဉ် အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ပါ။၄င်းစနစ်ကို အသုံးပြုထားရင် ဖုန်းက Ring မြည်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ vibration (တုန်ခါမှုကတော့) ရှိနေမှာ။နောက်
တစ်ခုက Air plane Mode ပါ အဲဒါက လေယာဉ်ပျံပေါ်ရောက်နေစဉ် ဖုန်းကို လုံးဝ ပိတ်စရာ မလိုဘဲ ဖုန်း
Profile ကို စိတ်ကြိုက် သတ်မှတ် ထားလို့ရပါတယ်။Profile ထဲမှာ Ringtone ဖုန်းသံ ရွေးနိုင်ပါတယ်။ အသံ အတိုး၊အကျယ်၊ Keypad Tone နံပါတ်နိပ် တဲ့အသံ အမျိုးအစားပါ။ ပိတ်တာ၊တိုးတာ ပါတယ်။Massege လာတဲ့အခါ လာစေချင် တဲ့အသံ သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Save လုပ်ပြီးထွက် နိုင်ပါတယ်။
Network - ဒီစနစ်က မိမိဖုန်းမှာ Network လိုင်းပူးတာ၊ လိုင်းမရှိတဲ့ အခါမျိုးမှာ ပြန်ရှာဖို့ပါ။ - Setting ကိုသွားပြီး၊ Mobile Network ကိုသွားပြီး ၊ Mobile Network ကိုသွားပါ။ အဲဒီအထဲက Network Automatically
အလိုအလျောက် ရှာတဲ့ (မိမိလိုင်း အစစ်အမှန် ကိုရှာပေးတဲ့စနစ်ပါ) ဒါနဲ့မရမှ Manually (မိမိကိုင်တိုင် လိုင်း
ရွေးချယ် သတ်မှတ် ခြင်းပါ။မှန်ကန်အောင်ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ MPT ဆို MPT ပေါ့။
Posted by Zayyar Ting at 9:38 PM No comments:
တစ်ယောက်အဖြစ် အသက်မွေးမယ်ဆိုရင် နောက်ပိ်ုင်းမှာ အခြေအနေအများကြီး ကောင်းနိုင်တယ်၊ ဘာကြောင်းလည်းဆိုတော့ Network တပ်ဆင်ခြင်း၊ အစဉ်တစိုက် ထိန်းသိမ်းခြင်းက အများကြီး အကျုံး ၀င်လာမှာပါ။ အိမ်များ၊ ရုံးများ၊ မီနီမတ် များ၊ ကုမ္ပဏီများတွင် Network တပ်ဆင်ခြင်း (ထိန်းသိမ်း)ခြင်းများ လိုအပ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ခေတ်ရေစီးအရ တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံမှာ Network စနစ်များဟာ အဆင့်ဆင့် အရှိန်အဟုန် တိုးမြင့်လျှက်ရှိနေပါတယ်။ ထို့အတူ တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံ၊ တစ်မြို့နှင့်တစ်မြို့ မှာလည်း ထိုကဲ့သို့ ကူးလူး ပျံနှံ့သွားမည်မှာ သေချာပါသည်။Network စနစ်ဟာ လုပ်ငန်းအသီးသီးနှင့် သက်ဆိုင်
နေမှာပါ ဘာဖြစ်လို့ပြောရလည်းဆိုရင် မိမိလုပ်ငန်းလွယ်ကူ လျင်မြန် အဆင်ချောမွတ်စေဖို့ Network ချိတ် ဆက်မှသာ ပြီးပြည့် စုံစေမှာပါ။ လုပ်ငန်းတိုင်းနဲ့ သက်ဆိုင်စေမယ်ဆိုတာက ဥပမာ ပြောရမယ်ဆိုရင်
မိမိလုပ်ငန်းကို ရုံးအဆောက်အဦး အပေါ်ထပ် အောက်ထပ်၊ အခန်းများ၊ ရပ်ကွက်များ၊မြို့ရွာများ ခွဲပြီးပြန့်
ပွားအောင် လုပ်ဆောင်ထားပြီဆိုရင်လိုအပ်နေသော အချက်အလက် များပို့ဆောင်ဖို့ လူသုံးနေစရာ မလိုပါဘူး Networkပေါ်ကနေ ဖိုင်တွေ ၊လိုအပ်နေတဲ့ အချက်အလက်တွေ ပို့ဆောင်လို့ရပါ တယ်။ အဲဒါဟာ လူတွေကို လုပ်အား ကို သက်သာစေပါတယ် ပိုနေတဲ့ လုပ်အားတွေ ကို အခြားနေရာမှာ စီမံ ခန့်ခွဲစေ နိုင်မှာပါ။ ဘဏ် တွေအနေ နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် အခု E-card, Visa card, Credit card တွေ ကနေပြီး ငွေလွဲ၊ငွေထုတ်ခြင်း စတဲ့ ကိစ္စ တွေ ကို လည်းအချိန်နဲ့တပြေညီ ဆောင်ရွက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီမှာမေးနိုင်တာက Networking နှင့် ဘဏ်နဲ့ ဘာပတ်သက် လဲဆိုရင် သိပ်ကိုပါဝင်ပတ်သက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘဏ် တွေမှာ Securityတွေထားရှိသလို E-card,Credit card တွေမှာလည်း လုံခြုံရေး (Network security) စနစ်တွေ အထူးလို အပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြောရမယ် ဆိုရင် ICT အခန်းကဏ္ဍဟာ သိပ်ပြီးကျယ်ဝန်း ပါတယ် ရှုပ်ထွေးတဲ့ပြသာနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။မီးပွိုင့်၊ ရထား ၊လေဆိပ် တွေဟာ Computer Program များဖြင့် Auto လုပ်ဆောင်ထားခြင်းဖြင့် ပြေလည်စေမှာပါ။ Networking နည်းတူ Network security တွေဟာလည်း လွန် စွာမှအရေးပါအရာရောက်လျက်ရှိပါတယ်။